INdodana yomuntu iyiNkosi ngisho yosuku lwesabatha (Ingxenye 1) | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
INdodana yomuntu iyiNkosi ngisho yosuku lwesabatha (Ingxenye 1)
Kungani sikhethe lesi siqephu? Sihlangana kanjani nesimo sikaNkulunkulu? Kulo mbhalo, okokuqala esikwaziyo ukuthi kwakulusuku lweSabatha, kodwa iNkosi uJesu waphumela ngaphandle futhi waholela abafundi Bakhe emasimini. “Okubi” nakakhulu ukuthi baze “baqala ukukha izikhwebu ukuze badle.” NgeNkathi Yomthetho, imithetho kaJehova uNkulunkulu yayithi abantu akumele nje baphume phandle noma bazibandakanye nezinto ezenziwa ngeSabatha—zaziziningi izinto okwakungamele ukuba zenziwe ngeSabatha. Lesi senzo seNkosi uJesu sasidida kulabo ababephile ngaphansi komthetho isikhathi eside, futhi savusa ukugxekwa. Mayelana nokudideka kwabo kanye nangendlela abakhuluma ngayo ngalokhu uJesu akwenza, sizokubuyisela eceleni okwamanje bese siqala ngokugxila ekutheni kungani wakhetha ukukwenza ngeSabatha, phakathi kwazo zonke izinsuku, nanokuthi yini lena ayefuna ukuyikhuluma kubantu ababehlala phansi komthetho ngalesi senzo. Lokhu ukuxhumana phakathi kwalesi siqephu kanye nesimo sikaNkulunkulu engifuna ukukhuluma ngaso.
Ngesikhathi ifika iNkosi uJesu, yasebenzisa izenzo ezibonakalayo ukuze ikhulume nabantu: UNkulunkulu wayesesukile eNkathini Yomthetho futhi eseqale umsebenzi omusha, kanti lo msebenzi omusha wawungadingi ukugcinwa kweSabatha; ngesikhathi uNkulunkulu ephuma emikhawulweni yosuku lweSabatha, lokhu kwakungamazwibela omsebenzi Wakhe omusha, umsebenzi wangempela futhi omkhulu wawuseza. Ngesikhathi iNkosi uJesu iqala umsebenzi Wayo, yayisishiye ngemuva izintambo zeNkathi Yomthetho, futhi yayisidlubulundele emigomeni nezimiso zangaleyo nkathi. Kuyena, kwakungekho nokuncane oluhambisana nomthetho; Wayesewulahla ngokuphelele futhi engasawugcini, futhi wayengasadingi ukuba isintu siwugcine. Ngakho lapha uyabona ukuthi iNkosi uJesu yadabula emasimini ngeSabatha; iNkosi ayiphumulanga, kodwa yayingaphandle isebenza. Lesi senzo Sakhe sethusa indlela abantu ababecabanga ngayo futhi Wabatshela ukuthi Yena akasaphili ngaphansi komthetho, nanokuthi useyishiyile imikhawulo yeSabatha wabe esevela phambi kwesintu futhi phakathi kwabo ngomfanekiso omusha, nange ndlela entsha yokusebenza. Lesi senzo Sakhe satshengisa abantu ukuthi Yena ufike nomsebenzi omusha owaqala ngokuthi uphume emthethweni futhi uphume naseSabatheni. Ngesikhathi uNkulunkulu enza umsebenzi Wakhe omusha, akabuyanga esanamathela kokudala, futhi wayengasakhathazekile ngezinqubo zeNkathi Yomthetho. Futhi wayengaphazamiswa umsebenzi Wakhe wangenkathi engaphambilini, kodwa Wasebenza ngokujwayelekile ngeSabatha futhi ngesikhathi abafundi Bakhe sebelambile, bakha izikhwebu badla. Konke lokhu kwakujwayelekile emehlweni kaNkulunkulu. UNkulunkulu wayengaba nesiqalo esisha somsebenzi Wakhe omningi afuna ukuwenza kanye nezinto afuna ukuzisho. Uma eke waba nesiqalo esisha, Yena akabe esakhuluma ngomsebenzi Wakhe omdala noma aqhubeke nawo. Ngokuba uNkulunkulu unezimiso Zakhe emsebenzini Wakhe. Ngesikhathi Yena efuna ukwenza umsebenzi omusha, kungesikhathi lapho efuna ukuletha isintu esigabeni esisha somsebenzi Wakhe, futhi lapho umsebenzi Wakhe usungene esigabeni esiphezulu ngokuthe xaxa. Uma abantu beqhubeka nokwenza ngendlela yokushiwo kudala noma imigomo noma beqhubeka nokubambelela kukho, Yena ngeke akukhumbule noma akutuse lokho. Lokhu kungenxa yokuthi Yena uselethe umsebenzi omusha, futhi usengene esigabeni esisha somsebenzi Wakhe. Uma eqala umsebenzi omusha, Uvela kubantu enomfanekiso omusha, ngasohlangothini olusha sha, futhi nangendlela entsha sha ukuze abantu babone izingxenye ezahlukene zesimo Sakhe kanye nalokhu anakho nayikho. Lena enye yezinjongo Zakhe emsebenzini Wakhe omusha. UNkulunkulu akabambeleli kokudala noma athathe indlela eyaziwayo; uma Yena esebenza futhi ekhuluma, akukho nzima ngale ndlela abantu abacabanga ngayo. KuNkulunkulu, konke kumahhala futhi kukhululiwe, futhi akukho ukuthikanyezwa, akukho izithiyo—lokhu akuletha esintwini inkululeko nokukhululwa kodwa. UnguNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu okhona ngobuqotho nangeqiniso. Yena akasiwo unodoli noma isithombe sobumba, futhi uhluke kakhulu ezithixweni abantu abazingcwelisayo futhi bazidumise. Yena uyaphila futhi unomdlandla, futhi lokho okulethwa amazwi nomsebenzi Wakhe kubantu kungukuphila kanye nokukhanya kuphela, inkululeko nokukhululwa kuphela, ngokuba uphethe iqiniso, ukuphila, kanye nendlela—Akakhinyabezwa yilutho kunoma imuphi umsebenzi Wakhe. Noma ngabe abantu bathini futhi noma ngabe babona kanjani noma bawuhlola kanjani umsebenzi Wakhe omusha, Uzokwenza umsebenzi Wakhe ngaphandle kokukhononda. Akakhathazeki ngemicabanga yanoma ubani noma ngeminwe ekhomba ngokusola emsebenzini nasemazwini Akhe, ngisho noma ukumelana nokuphikisana kwabo Naye okunamandla, emsebenzini Wakhe omusha. Akukho noyedwa phakathi kwendalo ongasebenzisa ukucabanga komuntu, noma ukubona ngamehlo engqondo komuntu, ulwazi, noma ubuqotho bomuntu ukukala noma ukuchaza lokhu okwenziwa uNkulunkulu, ukujivaza noma ukuketula umsebenzi Wakhe. Akukho ukuthikanyezwa emsebenzini Wakhe nakulokho kwenzayo, futhi ngeke kwavinjwa yinoma imuphi umuntu, into, noma okuthile, futhi ngeke aphazanyiswa imimoya yobutha. Ngokomsebenzi Wakhe omusha, uhlala njalo eyiNkosi enqobayo, kanti noma iyiphi imimoya yobutha kanye nawo wonke amahlubuka kanye nabakhohlisi esintwini, bonke bacindezelekile ngaphansi kwezinyawo Zakhe. Noma ngabe umsebenzi Wakhe awenzayo ukusiphi isigaba esisha, nakanjani uzothuthukiswa futhi ukhuliswe phakathi kwesintu, futhi nakanjani uzokwenziwa ngaphandle kokuthikanyezwa emhlabeni wonke kuze kube sekuphethweni komsebenzi Wakhe omkhulu. Lona uNkulunkulu onamandla onke nokuhlakanipha, kanye negunya namandla. Ngakho, iNkosi uJesu yayingaphumela phandle ngokusobala futhi isebenze ngosuku lweSabatha ngokuba enhliziyweni Yayo yayingekho imigomo, futhi lwalungekho ulwazi noma isifundiso esavela esintwini. Lokhu ayenakho kwakungumsebenzi kaNkulunkulu omusha kanye nendlela Yakhe, futhi umsebenzi Wakhe wawuyindlela yokukhulula abantu, ukubadedela, ukubavumela ukuba babekhona ekukhanyeni, nokubavumela ukuba baphile. Kanti labo abakhonza izithixo noma onkulunkulu bamanga baphila nsuku zonke beboshiwe uSathane, bebanjwe yilo lonke uhlobo lwemigomo namahlazo—namhlanje into eyodwa ayivumelekile, kusasa enye—ayikho inkululeko ezimpilweni zabo. Bafana neziboshwa zifakwe ozankosi, ayisaphathwa eyenjabulo. Ingabe “ukuthiywa” kumele ini? Kumele izingqinamba, izibopho, kanye nobubi. Ngesikhathi umuntu eseqala ukukhonza izithixo, bakhonza unkulunkulu wamanga, bakhonza umoya omubi. Izithiyo ziza kanye nalokhu. Angeke udle lokhu nalokhuya, namhlanje awukwazi ukuphuma phandle, kusasa awukwazi ukulayitha isitofu, ngosuku olulandelayo awukwazi ukungena endlini entsha, kumele kukhethwe izinsuku ezithile zemishado nemingcwabo, kubandakanya nokuzalwa kwabantwana. Kubizwa ngokuthini lokhu? Lokhu kubizwa ngokuthi yisithiyo; kungukuboshwa kwesintu, izintambo zikaSathane kanye nemimoya emibi ebalawulayo, ebamba izinhliziyo kanye nemizimba yabo. Ingabe lezi zithiyo zikhona kuNkulunkulu? Uma ukhuluma ngobungcwele bukaNkulunkulu, kumele ucabange lokhu kuqala: KuNkulunkulu azikho izivimbelo. UNkulunkulu unezimiso emazwini nasemsebenzini Wakhe, kodwa azikho izithiyo, ngokuba uNkulunkulu uqobo Lwakhe uyiqiniso, indlela, nokuphila.
Okulandelayo: Umfanekiso Wemvu Elahlekile